Ukuqinisekiswa ngokusemthethweni: iLenovo Z6 Pro iya kuba ngumnxeba we5G | I-Androidsis
U-Lenovo kutsha nje utyhile ukuba inkampani elandelayo yase-China yefowuni, i I-Lenovo Z6 Pro, izokwazisa ngokusesikweni e-China nge-23 ka-Epreli. Phambi kokuba ikhutshwe, iinkcukacha ezininzi zityhilwe kwi-Intanethi malunga.
Ngoku, kuphuhliso olutsha, umphathi wenkampani uthumele umfanekiso-skrini weefowuni zenethiwekhi kwi-Weibo, eqinisekisa oko kwakukade kuvuza: isixhobo sokusebenza okuphezulu siya kuhambelana nonxibelelwano lwe5G.
Sele iqinisekisiwe into yokuba iLenovo Z6 Pro iya kunikwa amandla yiprosesa Qualcomm Snapdragon 855. Ayizukuba yeyokuqala ukuhamba nenkampani ukupakisha chipset. Inkqubo ye- ILenovo Z5 Pro GT isebenza nge-chipset efanayo.
I-Lenovo Z6 Pro ngenkxaso yokunxibelelana kwe5G
Kwii-teasers ekwabelwana ngazo ngaphambili, inkampani iyichazile loo nto ikhamera yefowuni yakho iya kuba nakho ukubamba i-100 megapixel shots. Kukho ithuba lokuba isigebenga saseTshayina sixhomekeke kuhlobo oluthile lwesoftware okanye "iqhinga" lokudubula imifanekiso eyi-100 ye-MP, njengoko kungenakulindeleka ukuba izalisekise isivamvo esinomthamo onjalo we-megapixel. Oku kunokuba yinto HyperVision apho ifemu ibizigwagwisa ngo-Februwari.
Ngomnye umntu ohlekisayo, uLenovo uyakuqinisekisa oko iZ6 Pro ixhasa iHyper Video, ukuvumela amaxabiso okugqithisa aphezulu kuneevidiyo esele zikhona. Kude kube ngoku, iinkcukacha zekhamera yeHyperVision kunye neVidiyo yeHyper azikatyhilwa. Le yimibuzo esiza kufunda ngayo kwaye sinike ingxelo kamva, kwiintsuku ezizayo.
Ukuze sazi ngokuchanekileyo into ebonelelwa yi-smartphone, kunye nexabiso layo kunye neenkcukacha zokufumaneka kwayo, kuya kufuneka silinde de inkampani isungule ngokusesikweni i-Lenovo Z6 Pro kumsitho wango-Epreli 23 e-China.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » Ukuqinisekiswa ngokusesikweni: iLenovo Z6 Pro iya kuba ngumnxeba we5G
UMlingo UI 2.1 uya kuphumeza i-GPU Turbo 3.0 kunye nokunye kwi-Honor V20 kunye noMlingo 2 kungekudala